Izinhlelo eziyisikhombisa ezithandwa kakhulu ze-Web Scraping On The Internet - Semalt Expert Opinion
Idatha eboniswe kumawebhusayithi ahlukahlukene namabhulogi angadliwa kuphela ngokusebenzisa i-web ekhethekile ama-scrapers. Ungakwazi ukukopisha futhi ukunamathisela idatha ewusizo kumadokhumenti eWiki ngesandla noma uthole uhlelo lwe-web scraping efakwe kumshini wakho. Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi indlela oyikhethayo, uzoba nokufinyelela okugcwele ematheksthini oyifunayo nezithombe - home network setup services. Isofthiwe ye-web scraping ilayisha ngokuzenzakalelayo futhi ikhiphe idatha kusuka kumasayithi ahlukahlukene ngokuvumelana nezidingo zakho. Ezinye zezinhlelo ezinhle kakhulu futhi eziwusizo zibalulwe ngenzansi.
1. A1 Iwebhusayithi Scraper:
Ukusebenzisa le software ye-scraping software, ungalondoloza kalula idatha yakho ngefomethi yamafayela e-CSV noma uthole lawo mafayela angeniswe ehhovisi noma kuma-yolwazi ewebhu. Leli thuluzi likhulu ukukhipha izithombe kusuka kumawebhusayithi aqinile futhi isebenza ezinkundleni zezulu, ukuhamba namahhotela, ukukhipha idatha yabo ngemizuzwana.
2. I-Web Scraping Library:
Lena enye yezinhlelo zokusebenza ezinamandla kunazo zonke ze-web. Ikhululekile ngezindleko futhi idala amafayela ahlelekile futhi ahleliwe kuwe. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi ingasiza ukukhipha okuqukethwe kusuka kwezinye izinhlelo zokusebenza zewebhu futhi uguqule ibe yifomethi ye-JSON, amaspredishithi, nama-Linq amakhodi.
I-CatchPage isebenza ngokuphumelelayo kokubili kohlelo nabangewona uhlelo futhi akudingi ukuthi ukhokhe okuningi ngenxa ye-premium version yayo..Yenye yezinhlelo zokusebenza ezinamandla kunazo zonke zokubamba iwebhu ezithatha idatha emakhasini aphuzi, amakhasi amhlophe, nezinkomba ezinkulu ngaphandle kwenkinga.
4. Umculi we-Craigslist we-Web kanye ne-imeyili:
Inguqulo yamahhala yalesi sikhangisi sewebhu isetshenziswa kakhulu ngabathengisi bezokuxhumana, abachwepheshe be-SEO, nezinhlangano ezinkulu. Ungathola imithwalo yedatha ngaphandle kokukhathazeka ngekhwalithi yayo. I-Craigslist iwebhu kanye ne-imeyli yomcubungula kuhle kokubili amawebhusayithi akho nama-imeyili futhi ingakhipha yonke imibhalo ewusizo nezithombe zingakapheli amahora.
5. Ukukhipha noma kuphi:
Uma ukhathele izinhlelo zendabuko, Noma kuphi. Lenye yezinhlelo ezinamandla kunazo zonke futhi lisiza ukuqoqa, ukuhlela nokugcina idatha kungakhathaliseki ukuthi kuningi nobunzima. Ngalesi thuluzi, ungathola idatha oyifunayo ngemizuzwana kunamahora. Ngakho, kusindisa kokubili isikhathi sakho namandla futhi unikeza imiphumela enembile kakhulu.
6. Ifayela le-imeyli ne-Web Scraper:
Ifayela le-imeyli ne-Web Scraper ikuvumela ukuthi ukhiphe wonke amakheli e-imeyili kanye nokuqukethwe kwewebhu, futhi ungakopisha futhi unamathisele leyo datha kumafayili akho e-Word. Ngaphandle kwalokho, ingagcina amafayela e-CSV, ama-PDF namafayela we-XML kuwe database, ongayifinyelela noma nini lapho udinga.
7. Umshini wamanzi:
Umfelandawonye uyinhlangano yamahhala futhi enye ye-web ukusula kakhulu, ukususwa kwedatha yewebhu, ukuvuna iwebhu, izinhlelo zokukhwabanisa zewebhu kanye nezinhlelo zokwehliswa kwesikrini. Ungayisebenzisa njengendlela yokuqala eyabonwayo web scraper njengoba leli thuluzi likhishwa kokubili imibhalo nezithombe. Kungaphinda kukhishwe okuqukethwe okuwusizo kumafayela evidiyo futhi kungenza imisebenzi ehlukahlukene ngaphakathi kwendaba yamaminithi. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi izobe igcine idatha kudivayisi yayo yesitoreji sefu noma ikulande kumshini wakho.